4 Koorsooyinka Shahaadada Sare ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadooyinka 2022
Raadinta sida loo helo shahaadada masters-ka bilaash? Halkan waxaa ah hage soo bandhigaya koorsooyinka shahaadada sare ee shahaadada sare ee bilaashka ah ee bilaashka ah oo ay la socdaan shahaadooyin ay bixiyaan jaamacado caalami ah oo sumcad leh oo la aqoonsan yahay oo aad dalban karto.
Tartanka loogu jiro horumarinta xirfadda, shahaadada mastarka ayaa ah waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca waana sidaas sababta oo ah waxay caddeysay inay tahay aalad ama shahaado awood leh oo aqoontaada, xirfadahaaga, iyo guud ahaan u qaadaysa heerkaaga xiga. Gaar ahaan hadda shahaadooyinka jaamacadeed hadda waxaa loola dhaqmaa sidii 'shahaado guud'.
Waxaa jira dhowr sababood oo ay dadku u raacaan shahaadada masterka, waxay noqon kartaa sababo shakhsi ah, si ay u helaan dalacsiin goobta shaqada, si ay u bilaabaan ganacsi cusub ama waddo shaqo, si ay u noqdaan kuwo xirfad leh, si ay u koraan jaranjarada tacliinta. iwm.
FIIRO GAAR AH: Inta aad halkan joogto, waa inaad sidoo kale ogaataa inay jiraan dugsiyada lacag kugu bixiya si aad wax ugu barato internetka.
Sababta loo helayo shahaadada waa mid aan dhammaad lahayn laakiin sidoo kale waa muhiim sidoo kale maadaama aad go'aansatay inaad sii wadato waxbarashadaada oo aad qaadato mid ka mid ah koorsooyinka shahaadada mastarka ee internetka ee bilaashka ah ee aan dhowaan soo taxi doono ayaa kaa caawin doonta horumarinta xirfaddaada iyo wixii intaa ka sii badan, waxaad heleysaa shahaado ka dib markii la dhammeeyo.
Haa, waa wax xiiso leh inaad horumariso xirfaddaada laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa walaac iyo qaali sidoo kale qofka adduunka casriga ah uma qalmo stress mana u qalmo wax badan, maaha hal-abuurnimada hadda jirta iyo horumarka tignoolajiyada ee loo abuuray si nolosha looga dhigo mid fudud oo aan qaali ahayn sidoo kale. .
In nolosha loo fududeeyo iyo ka jaban, Hal-abuurkan iyo horumarka tignoolajiyada ayaa wax weyn ku soo kordhiyey qaybta waxbarashada oo hadda waxa aad ka heli kartaa shahaado kasta oo online ah, shahaadada Masterka oo lagu daray, jawi ka dhib yar oo dhowr tilmaan iyo casharo ah oo ay sidaas ku kharash yar tahay.
Ku saabsan Shahaadooyinka Masters-ka ee Online-ka ah oo wata Shahaadooyin
Faa'iidooyinka Koorsooyinka Shahaadada Masters-ka ee Online-ka ah oo wata Shahaadooyin
Shuruudaha Gelitaanka ee Shahaadada Masterka ee Online-ka
Waa maxay farqiga u dhexeeya khadka tooska ah iyo shahaadada mastarka shahaadada labaad?
Ma jiraan shahaadooyin onlayn ah oo bilaash ah?
Halkeen ka heli karaa shahaadada masters-ka si bilaash ah?
Meelo aad ka heli karto Shahaadada Masters Degree Bilaash
Koorsooyinka Shahaadada Masters-ka ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadooyinka wata
Barnaamijka MIT Media Lab ee Farshaxanka & Sayniska Warbaahinta
Machadka Curtis ee Muusikada, Master of Music
Jaamacadda Dadka ee Barnaamijka MBA ee Maareynta
Jaamacadda Dadka Master of Education
Barashada khadka tooska ah waa mid ka mid ah isbeddelada ugu waaweyn uguna wanaagsan ee waaxda waxbarashadu soo martay muddo dheer, waxaan ku dhiirraday in waaxda ay qabatay shaqo wanaagsan oo adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ah ee casriga ah si wanaagsan looga faa'iideysto natiijada ka soo baxdaana ay aad u faa'iido badan tahay.
Halkii aad ku ordi lahayd inaad aadeyso iskuulada oo aad la kulantid culeyska iyo dhibaatada, waxaad wali baran kartaa wax kasta oo aad rabto, hel shahaadada aad dooratay, oo ay ku jiraan koorsooyinka shahaadada masters-ka ee bilaashka ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin raaxada gurigaaga oo leh kombiyuutar laptop / desktop ah ama taleefan casri ah iyo khadka internetka.
Abuuritaanka baraha internetka waa mid ka mid ah tabarucaadka waawayn ee tikniyoolajiyadda casriga ahi ay ka geysteen goobta waxbarashada iyo hal-abuurnimada tan oo kale ah waxaa loola jeedaa inuu ku raaxaysto qof walba, waana taas sababta ganacsatada qaarkood, ururada iyo shirkadaha qaarkood ay doorbidaan inay shaqaaleeyaan shakhsiyaad helay xirfaddooda, aqoontooda iyo shahaadooyinkooda iyada oo loo marayo barashada internetka.
Si fudud loo dhigo, shaqaalaha hay'adahani waxay aaminsan yihiin haddii aad ka faa'iidaysan karto hal-abuurkan oo kale oo aad weli baranayso markaas waxaad awoodi kartaa inaad fahamto sida muhiimka ah ee tiknoolajiyada casriga ah iyo hal-abuurka ay gacan uga geysan karaan guusha urur, ganacsi, ama shirkad.
Marka laga hadlayo daraasadda internetka, taas oo ka faa'iideysata internetka si ardayda loo baro loona qalabeeyo xirfadaha lagama maarmaanka u ah iyo aqoonta meel kasta oo aad adduunka ka joogto. Tusaale ahaan, waxaad joogi kartaa Malaysia iyo hel internetka shahaadada mastarka ee jaamacadda Stanford ama haddii aad xiiseyneyso inaad hesho shahaado ganacsi waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah Iskuulka ganacsiga Harvard khadka tooska ah sax ah raaxada gurigaaga ama meel kasta oo kugu habboon oo aad ku baran karto.
Xaqiiqdii, machadyada heer caalami waxay qaateen hal-abuurka barashada khadka tooska ah sannadihii la soo dhaafayna waxay soo saareen qalinjabiyeyaal heer sare ah halkaasoo qaarkood ay ku soo galeen shaqada xoog leh jagooyin ka wanaagsan kuwii kalena ay awood u yeesheen inay bilaabaan ganacsiyo cusub oo guuleystay.
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato tan laakiin dhab ahaantii waad qaadan kartaa koorsooyin onlayn ah oo bilaash ah oo ay bixiyaan hay'adaha Ivy League, haa isla iskuulada Ivy League ee aad taqaano kuwaas oo caan ah, oo ka mid ah iskuulada ugu fiican adduunka, aad u qaali ah oo aad u tartan badan in la galo, qof kasta oo ka socda meel kasta oo adduunka ka mid ah ayaa qaadan kara koorsooyinka internetka ee ay bixiyaan iyaga oo aan bixin dime.
Barashada khadka tooska ah guud ahaan waxay leedahay faa iidooyinkeeda laakiin sidee ku saabsan faa'iidooyinka dhab ahaantii helitaanka shahaadada shahaadada mastarka ee internetka, sidoo kale waan kala hadli doonaa.
Si ka duwan ardayga dugsiga caadiga ah oo ay tahay inuu tago fasalka maalin kasta, si aad u hesho shahaadada Masterka ee internetka, waxaad baran kartaa isla koorsada oo aad ka heli kartaa xirfado, farsamooyin iyo aqoon isku mid ah adigoo gurigaaga jooga ama meel kasta oo kuu muuqda inaad ku faraxsan tahay inaad barato .
Shahaadada mastarka ee khadka tooska ah waa ka raqiisan tahay waana ka jaban tahay marka la barbar dhigo barnaamijyada masters-ka ee soo jireenka ah.
Barnaamijyada shahaadada mastarka ee khadka tooska ah waa kuwo dabacsan taasoo la macno ah inaad wax ku baran karto jadwal adiga kuu gaar ah.
Dabacsanaanta shahaadada mastarka ee internetka ayaa u oggolaaneysa inaysan gabi ahaanba saameyn ku yeelan howlahaaga maalinlaha ah, dadka qaarkiis xitaa waa la shaqeeyaa inta ay ku baranayaan shahaadada mastarka khadka tooska ah.
Kadib marka la dhammeeyo, faa'iidooyinka ayaa la mid ah qalin-jabiyaha mastarka dugsiga.
Way ka dhakhso badan tahay in la dhammaystiro.
Xagga sare waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee la xiriira helitaanka shahaadada mastarka internetka.
Waxaa jira shuruudo gaar ah oo loo baahan yahay si loo bilaabo barnaamijyada shahaadada mastarka ee internetka oo shuruudahan guud yihiin, laakiin wali la xiriir hay'adda martida loo yahay si aad wax badan uga ogaato, haddiiba ay dhacdo.
Si loo dalbado barnaamij kasta oo shahaadada mastarka ee internetka, codsadayaashu waa inay dhammaystireen barnaamijka shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad.
Your shahaadada bachelor shahaadadu waxay qayb ka noqon doontaa nidaamka dalabka gelitaanka waxaana lagaa doonayaa inaad soo gudbiso inta lagu jiro arjiga.
In kasta oo qaar ka mid ah machadyada khadka tooska ah ay u baahan karaan GPA gaar ah oo ku saabsan aagga daraasadda, machadyada khadka tooska ah qaarkood uma baahna sidaas darteed waa inaad ka hubisaa machadyada khadka tooska ah ee martida loo yahay si aad arrintan wax uga weydiiso.
Qaar ka mid ah dugsiyada khadka tooska ah ayaa laga yaabaa ama laga yaabaa inay codsadaan buundooyinka GRE ama GMAT ee codsigaaga sayidkaaga onlaynka ah, waa inaad ka hubisaa machadkaaga martida loo yahay si aad u hubiso
Si sax ah u buuxi foomka codsiga shahaadada masters-ka ee khadka tooska ah, xaqiiji waxa aad galisay ka hor intaadan gudbin.
Shahaadada shahaadada mastarka ee khadka tooska ah iyo shahaadada shahaadada mastarka dhaqameed waa isku mid haddii laga helo jaamacado caalami ah oo la aqoonsan yahay. Labadooduba way idin geyn karaan isla meelahaas waana laga aqbali karaa adduunka oo dhan.
Su'aashan ama halkii jahwareer ay riixday dad badan oo doonaya inay kasbadaan shahaadooyinkooda internetka si ay uga fogaadaan barashada dhaqameed maxaa yeelay waxay u maleynayaan in shahaadada internetka aysan aheyn mid sax ah sida midka laga soo qaatay dugsiga caadiga ah.
Ma jiro wax faraq ah oo u dhexeeya shahaadada masters-ka ee khadka tooska ah iyo kan caadiga ah, mid uun baa khadka tooska ah looga helaa kan kalena maahan. Mid ka mid ah waxyaabaha aad mar walba hubin karto waa haddii shahaadada internetka sidoo kale laga aqoonsado oo laga aqbalo waddankaaga sidoo kale.
Marka, jahwareerkan la cadeeyay waa waqtigii aan ku noqon lahaa sababta asalka ah ee maqaalkan. Waxaan hoos ku taxay dhowr koorso oo shahaadada masters ah oo si gaar ah khadka tooska ah ugu siiya bilaash jaamacado caalami ah oo la aqoonsan yahay.
Haa, waxaa jira dhowr shahaado oo bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay barashada shahaadada koowaad, masters-ka iyo xitaa Ph.D. barnaamijyada. Xaqiiq ahaan, Barnaamijka bilaashka ah ee khadka tooska ah ee Farshaxanka & Sayniska ee MIT wuxuu daboolayaa labada sayid iyo Ph.D. barnaamijyada oo dhan waa bilaash!
Sikastaba, diiradeyda maqaalkan qaaska ah wuxuu asal ahaan ku saleysan yahay shahaadooyinka masters-ka ee bilaashka ah ee laga helo ardayda adduunka oo idil iyo faahfaahinta codsigooda.
Jaamacadda Dadku waa mid ka mid ah meelaha aad ka heli karto shahaadada mastarka waxbarashada bilaashka ah. Jaamacaddu waa jaamacadda ugu horreysa oo keliya ee Mareykanku aqoonsan yahay oo leh waxbarasho lacag la'aan ah. UoP waxay fulisaa dhammaan barnaamijyadeeda, abaalmarinno, iyo dhammaan shahaadooyinkeeda shahaadooyinka si khaas ah khadka tooska ah.
Ka dib liistadayada barnaamijyada shahaadada masters-ka bilaashka ah halkan, hoosta ayaa ah meelaha aad ka heli karto shahaadada masters-ka bilaash;
Machadka Teknolojiyada Massachusetts (MIT)
Machadka Curtis ee Muusikada.
Dhammaan koorsooyinkan shahaadooyinka masters-ka ee bilaashka ah ee shahaadooyinka leh shahaadooyinka waxaa laga heli karaa khadka tooska ah meel kasta oo adduunka ka mid ah dhammaantoodna waa bilaash. Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta iyo isku xirnaanta arjiyada barnaamijyadan hoos ku xusan.
Barnaamijkani waa koorso shahaadada masters-ka ah oo bilaash ah oo shahaadooyin ah oo ay bixiso Machadka Massachusetts ee Teknolojiyadda (MIT), barnaamijku wuxuu aqbalaa musharrixiinta 50 ee sannad kasta iyaga oo ku qalabaya xirfado ay ku abuurayaan oo ay ku qaabeynayaan aalado casri ah oo loogu talagalay la qabsiga aadanaha iyo kordhinta taas oo ka caawin doonta hagaajinta nool.
Koorsooyinka Media Lab waxay wax ka qabtaan isgaarsiinta, qaabeynta, barashada, isdhexgalka aadanaha iyo kumbuyuutarka iyo ganacsiga iyo ardayda codsata codsigan si ay u helaan sahaminta dhamaanteed iyo inbadan.
Si aad u codsato barnaamijkan masters-ka ee bilaashka ah, codsadayaashu waa inay lahaadaan aqoon adag oo aasaasi ah oo ku saabsan sayniska kombiyuutarka, cilmi-nafsiga, naqshadaha, cilmiga neerfaha, injineernimada, iyo sayniska agabka. Dhibcaha GRE looma baahna laakiin TOEFL ayaa looga baahan yahay kuwa aan ku hadlin Ingiriisiga.
Dhammaan codsiyada oo ay ku jiraan saddex warqadood oo talo bixin ah iyo qoraallo laga soo qaatay hay'adihii hore dhammaantood waxaa lagu gudbin doonaa khadka tooska ah.
Machadka Curtis ee Muusiggu wuxuu bixiyaa koorso bilaash ah oo shahaadada masters-ka ah oo shahaadada muusikada ah, machadku wuxuu aqbalaa oo keliya 4% wadarta codsadaha taasoo ka dhigaysa barnaamij aad u xulasho badan.
Si aad u dalbato, codsadayaasha shahaadada mastarka miyuusigga ah waxay u baahan yihiin ugu yaraan soddon iyo laba dhibcaha qalin-jabinta waana inay haystaan ​​bachelor ah shahaadada muusikada ama qaataan ama hubiyaan ugu yaraan hal koorso suugaanta, riwaayadaha, farshaxanka, taariikhda, luqadda casriga ah iyo daraasadaha muusikada.
Dhibcaha GRE ama GMAT looma baahna inay codsadaan barnaamijkan laakiin dadka aan ku hadlin luqadda Ingiriiska ayaa looga baahan yahay inay qaataan TOEFL oo leh 79 iyo 80 dhibic.
Master-ka ee Maamulka Ganacsiga ee Maareynta waa barnaamij bilaash ah oo shahaadada mastarka ee internetka oo leh shahaadada ay bixiso Jaamacadda Dadka, barnaamijku wuxuu qaadanayaa shan iyo toban bilood oo daraasad waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro ama lix shuruudood oo ardayda mashquulka ahi ka dhigi karaan inay ku habboon yihiin jadwalkooda iyagoo qayb ka qaadanaya - waqti-barasho iyo qaadashada hal koorso xilli-dugsiyeedkiiba.
Si aad u codsato barnaamijkan, codsadayaashu waa inay soo bandhigaan shahaadada koowaad ee jaamacadda, waa inay si fiican u yaqaanaan Ingiriisiga laakiin kuwa aan Ingiriisiga ku hadlin waa inay keenaan caddaynta aqoonta Ingiriisiga, haystaan ​​​​ugu yaraan laba sano oo waayo-aragnimo shaqo ah, oo ay leeyihiin hal tixraac oo ka iman kara loo-shaqeeyaha. ama macalimiin hore.
Dhibcaha GMAT looma baahna si loo sii wado codsigaaga laakiin warqad talobixin ah ayaa lagama maarmaan ah. Dhammaan dukumeentiyada waxaa lagu soo gudbin doonaa bogga codsiga ee la bixiyay.
Jaamacadda Dadku waxay siisaa koorso kale oo Masters-ka ah oo bilaash ah oo Waxbarashada ah oo leh shahaado loogu talagalay in lagu tababaro ardayda xirfadaha firfircoon ee waxbarashada, daryeelka carruurta, iyo hoggaanka bulshada.
Barnaamijku wuxuu leeyahay laba takhasus oo kala ah;
Waxbarashada Dugsiga Hoose / Dhexe
Ardayduna waa inay doortaan inay ku takhasusaan mid ka mid ah meelaha kor ku xusan.
Kahor intaadan dalban barnaamijkan hubi inaad leedahay shuruudaha soo socda;
Shahaadada shahaadada koowaad ee koowaad
Aqoonta Ingiriisiga, kuwa ku hadla Ingiriiska oo aan u dhalan waa inay qaataan TOEFL.
Looma baahna GMAT ama GRE
Dhammaan dukumiintiyada kor ku xusan waa in lagu soo gudbiyaa elektaroonig ahaan iyada oo loo marayo bogga dalabka tooska ah, bilow codsigaaga Halkan.
Halkaa waxaad ku haysaa tafaasiil dhamaystiran oo ku saabsan koorsooyinka shahaadada mastarka ee tooska ah ee bilaashka ah ee ugu fiican oo wata shahaadooyin iyo hagida lagama maarmaanka ah ee kaa caawin doonta inaad si guul leh u codsato barnaamijyadan.
Barnaamijyadu dhammaantood waa bilaash in wax la barto waxaadna weli heleysaa caddeyn dhab ah oo ay aqoonsan doonaan hay'adaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay meel kasta oo ay adduunka ka joogaan.
Liiska Jaamacadaha Caalamiga ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Jaamacadaha Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Maraykanka iyo Sida loo dalbado mid kasta
Sida loogu Barto Daawada Kanada Bilaash
Darajooyinka Degdegta ah ee Caalamiga ah ee Caalamiga ah
Barnaamijyo Degree Bachelor-ka ah oo Online ah oo raqiis ah
Koorsooyinka Bilaashka ah ee Jaamacadda Stanford
shahaadada mastarka oo bilaash ahshahaadada shahaadada mastarka oo bilaash ahbarnaamijyo shahaadada masters-ka ah oo bilaash ahshahaadada masters-ka ee bilaashka ah ee shahaadada leh shahaadadashahaadada masters-ka ee internetka
Previous Post:50 Harvard Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Post Next:11-ka Shaqo ee ugu Fiican ee Dawlada Dhexe
Pingback: Sida Loo Codsado Shahaadada Masters-ka ee Maraykanka ee Ogolaansho La Dammaanad qaaday - SearchNGR
Helder Zakariya wuxuu leeyahay,
September 11, 2021 at 8: 43 pm
Melhor u fiirso
September 11, 2021 at 8: 42 pm
Gostaria de estudar cursos ligados a Educação